CAJIIB: Arsen Wenger warkiisa waa soo batay Soomaaliya xitaa fariintaan ayaa laga diyaariyay. » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Africa/CAJIIB: Arsen Wenger warkiisa waa soo batay Soomaaliya xitaa fariintaan ayaa laga diyaariyay.
CAJIIB: Arsen Wenger warkiisa waa soo batay Soomaaliya xitaa fariintaan ayaa laga diyaariyay.
Laacibka Soomaaliya April 12, 2017
Laacib.so : Taageerayaal fara badan oo dunida ku nool ayaa maalmahaan oo dhan boggaga bulshada qabsaday balse waxaa Soomaalida taageerto Arsenal ayaa ka qeyb qaadanaya Boorar lagu soo bandhigayo in Wenger uu kooxda ka tago. Waxaa kamid ah taageerahan sawirka idinkaga muuqda oo ku sugan magaaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuu ka soo horjeeda in uu sii joogo macalin Arsen wenger leylinta Kooxda Arsenal.
Adduunka oo dhan Qof Arsenal taageero oo Sanadkaan mid ka xun uu soo maray ma jiro, waayo horay uma dhicin The Gunners in ay kaalinta 6aad ku jiraan horyaalka oo gabo-gabo ah xili ciyaareedkaan 2016-2017.
Dadka Taageerayaasha qaar ayaa xitaa dalbanaya in Arsene Wenger ay u aruuriyaan lacag uu ku noolaan karo 20 sano ee soo socoto,intaas oo Kaliya waxey u yeelayaan in halmar uu Kooxda ka tago odayga reer France ee Arsen Wenger.
MAN city oo kusoo biirtay loolanka loogu jiro Alvaro Morata
Live: Toos ula soco kulanka u dhexeeya Borussia Dortmund iyo Monaco